“Tsenaben’ny tantsaha”, andiany faha-5 ao Antsirabe, ho fampiroboroboana ny fambolena, ny fiompiana, ny lamba fitafy, ny sakafo, miaraka amin’ireo ivontoeram-pikarohana. Mpikarakara ny fiangonana katolika, diosezin’Antsirabe, miaraka amin’ny radio Haja, tohanan’ny minisiteran’ny Fiompiana, ny fambolena ary ny jono. Tanjona ny ahafahana manampy sy manoro lalana ny tanora tantsaha ho fanatsarana ny fihariana any ambanivohitra. Nanomboka ny 11 jolay teo izany ary mifarana anio, eo amin’ny tokotanin’ny Katedraly Notre Dame de la Salette.
Nentanina ny mponina any amin’ny faritra Atsinanana ny fiandohan’ny volana jolay ity mba ho tena matihanina ka hanao vaksiny ny ombiny sy ireo biby fiompy hafa ho fiarovana azy ireny amin’ny aretina. Manan-danja lehibe eo amin’ny toekarem-pirenena ny omby ka tsy azo atao ambanin-javatra ny fikarakarana ny fahasalamany. Omby 100 mahery no vita vaksiny nandritra ny andro fanentanana, ary mitohy ny fanaovana izany, sahanin’ny sampandraharaham-paritry ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana ary ny jono any an-toerana.
Nahazo milina vaovao famokarana herinaratra 200 Kw ny Jirama any Belo Tsiribihina, faritra Menabe. Efa antitra ny milina 310 Kw ka matetika miteraka olona mahatonga delestazy, mampikatso ny asa fihariana. Azo ity milina vaovao ity, atao hanampy tosika ny milina tranainy. Koa raha mandeha tsara ny milina tranainy, ampy maharaka ny tinady any an-toerana ny herinaratra vokarin’ny Jirama. Fa raha sendra tratran’ny tsy fandehanana tampoka, hiverina ihany ny olana eo amin’ny delestazy.